Af soomaali - Mellem kulturer
“Ka dib markuu na dhex maray wadahadal fiican qof talo bixiye ah, waxaan fahmay hadda in nolosha caruurta ama dhalinyarada ku nool Deenmaark, ay aad ooga bedelan tahay tii wadankagii hooyo. Tani waxay ii fududaysay inaan fahmo caruurtayda, oo aan wadahadal la yeelan karo.”
– Hooyo aan la magacaabin
WAALID U DHEXEEYA DHAQAMADA – la yeelo ilmahaaga wada hadal fiican
Talobixin qarsoodi ah oo loogu talagalay waalidka.
Waalidka u dhexeeya dhaqamada waxaad ka heli kartaa talo bixin lacag la’aan iyo qarsoodi ah. Waxaanu nahay waalid marwalbaa – waad nala soo xiriiri kartaa, haddii aad ka walwalsan tahay ilmahaaga wayn.
SOO GARAAC 70 27 03 66 maalin walba inta u dhaxaysa 9-15.
Khamiista 9- 21. (laga bilaabo abriil 2020)
Waxaanu nahay urur madaxbanaan oo aan wax xiriir ah lalahayn kamuunka. Talobixintaanada waxay ku wajahantahay waalidka, ku korinaya caruur dhaqamo kala duwan dhexdooda. Waxaan ka anbaqaadaynaa in waalid walba uu la jecel yahay ilmahiisa sida oogu fiican inuu noqdo. Laakiin way kala duwan tahay, sida aan u naqaano waxa u wanaagsan caruurta..
Inaad ahaato waalid ma aha arin fudud – wayna ka sii adag tahay, marka ilmahaaga uu ku korayo wadan cusub, oo leh dhaqamo iyo caadooyin ka duwan qiyamka iyo dhaqanka waalidka uu kala yimid wadankiisi. Qofka waxaa fuulaya culays ka imaanyaa xaga qoyskiisa iyo macaariftiisa, iyo isla markaa culays ka imaanaya xagga bulshada daanishka, oo la xidhiidha habka uu waalidka u tarbiyaynayo ilmahiisa.
Waan ognahay, inay adag tahay inaad caawinaad ka dalbato, oo aad u sheegto mashaakilkaada dad aadan aqoon. Laakiin sida aan khibrada u leenahay, waa caawinaad aad u wayn, inaad la wadaagto walwalka iyo aragtiyadaada qof aan aqoon hoose kuu lahayn.
Talobixiyadaanada waxaa waajib ku aha inay sirta qariyaan, waxayna leeyihiin waxbarasho xagga talobixinta ah, waxay barteen dhaqamada kala duwan iyo qurbahu raadka ay ku leeyihiin nolosha qoyska.
Waa suurtagal labduba in aad talobixin ku heli karto taleefan iyo fool ka foolba, iyo in qoyska wadhadal lala yeesho. Haddaad doonayso, waxaa laguugu tarjumi karaa wadahadalada taleefan.